DAAWO-Turkiga Oo Soo Bandhigay Qaabka Ardayda Soomaaliyeed ay Wax U Baraan “Sawirro” – Radio Muqdisho
DAAWO-Turkiga Oo Soo Bandhigay Qaabka Ardayda Soomaaliyeed ay Wax U Baraan “Sawirro”
Hey’adda Nile Organization ee laga leeyahay Dalka Turkiga ayaa soo bandhigtay qaabka ay wax u bartaan ardayda Soomaaliyeed ee dhigata iskuulka hey’adaasi gacanta ay ku heyso ee Ex Dugsi Sare Banaadir, iyadoo ardaydaasi ay ku soo bandhigeen Munaasabad lagu qabtay Muqdisho heeso isugu jira Soomaali iyo Turki, taasi oo ay u riyaaqeen ka qeyb galayaasha munaasabadaasi.
Munaasabadda oo ay ka qeyb galeen waalidiinta ardayda wax ka barata dugsigaasi,xubno ka socday Ururka haweenka Qaranka, waxaana munaasabadaasi lagu soo dhaweeyay gabdho u dhashay dalka Turkiga oo dalka u yimid in ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed kuwaasi oo dhawaan ka soo baxay jaamacadaha Turkiga.
Wasiirka haweenka maamulka Galmudug Sahro Maxamed Cali oo ka mid aheyd haweenkii munaasabadaasi lagu casuumay ayaa waxay dowladda Turkiga uga mahadcelisay taageerada dhinacyada badan leh ee dadka Soomaaliyeed ay siinayaan.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Batuulo Sheekh Axmed oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa muujisay sida ay ugu faraxsantahay caawimaada walaalaha Turkiga, waxaana ay guddoonsiisay gabdhaha u dhashay dalka Turkiga ee munaasabadda joogay islamarkaana Soomaaliya u yimid in ay caawiyaan hadiyado ururka haweenka Qaranka ugu talo galay.
Wixii ka dambeeyay socdaalkii ugu horreeyay ee uu Erdogan yimid Soomaaliya, waxaa sii xoogeystay xiriirka labada dal, iyadoo booqashadii ugu dambeysayna uu ku balan qaaday in mashaariicyo kale duwan oo hor leh dalka ay ka fulinayaan.
Naadiga Akhriska iyo Qoraalka Oo Soo Bandhigay bandhigii labaad ee ololaha dhiirigalinta akhriska iyo qoraalka “Sawirro”
Naadiga Akhriska iyo Qoraalka Oo Soo Bandhigay bandhigii labaad ee ololaha dhiirigalinta akhriska iyo qoraalka "Sawirro"